admin, Author at FootCricNepal
काठमाडौ बिश्वबिद्धालयमा हुन गइरहेको दोस्रो मदन भण्डारी मेमोरियल फूटबल प्रतियोगितामा यस सालदेखि महिला फूटबल पनि समाबेश गरिने भएको छ। पुरुष फूटबलको बाहुल्यता रहेको बिश्वबिद्धालयमा महिलाहरुलाइ पनि प्रोत्साहन गर्नका निम्ति सो Continue Reading
दिल्लीको जितमा सन्दिप ‘स्ट्यालिस प्लेयर अफ दि म्याच’ !
दुई खेलबेन्चमा बसेर पुन: कम्ब्याक गरेका सन्दिप लमिछानेले राम्रो सुरुवात गरेका छन। पन्जावबिरुधको खेलमा उनले ३ विकेट हाशिल गरे। सो क्रममा लामिछानेले गेल, केएल राउल र कुरानको विकेट लिए। १ Continue Reading
पन्जाबबिरुध मैदान उत्रेको दिल्लीले पहिले बलिङ गर्दै छ। दुई खेल बहिर बसेर पुन: फेरी पहिलो एघारमा राखिएको सन्दिप लामिछानेले ३ विकेट लिए। उनको चार ओभरको स्पेलमा ४० रन खर्चेर ३ Continue Reading
दुई खेलमा बेन्चमा बिताएको पछी पहिलो एघारमा स्थान बनाउन सफल सन्दिप लामिछानेले आज आफ्नो पहिलो ओभरमै विकेट लिए। उनले आफ्नो पहिलो ओभरको चौथो ओभरमा केएल राहुलको विकेट लिए। सन्दिपको पहिलो Continue Reading
जारी आइपिएलको ३७ औ खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र पन्जाब खेल्दै छन। पछीलो दुई खेलमा पहिलो रोजाइमा नपरेका सन्दिप लामिछाने आज भने पहिलो एघारमा स्थान बनाउन सफल भएका छन। दिल्लीले Continue Reading
दिल्लीले आज मुम्बईको समाना गर्दै, सन्दिपको टिममा पर्ने सम्भावना कती ?
भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को ३४ औं खेलमा आज सन्दिप लामिछाने अनुबन्धित दिल्ली क्यापिटल्सले मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्दै छ। नेपाली समयअनुसार बेलुका ८:१५ मा हुने सो खेल दिल्लिको Continue Reading
उत्कृष्ट खेलका बाबजुत नेपाल विश्वकप खेल्नबाट वन्चित !
आइसिसी विश्वकप छनोट अन्तर्गत निकै राम्रो प्रदशन गरेको नेपाली यु-१९ टोली विश्वकप छनोट हुन बाट वन्चित भएको छ । तर छनोट हुन नसक्नुको कारण नेपालको खराब प्रदशन थिएन, कारण थियो Continue Reading
आइसिसी एकदिवसीय वरियतामा माथि उक्लियो नेपाल !
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ( आइसिसी) को एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल माथि उक्लिएको छ । गत: महिना वारीयताको १५ औ स्थानमा रहेको नेपाली टोली अहिले आईसीसीले जारि गरेको ताजा वरियतामा १४ Continue Reading
मनाङ आज (आइएसएल) च्याम्पियन चेन्नाइयिनसँग भिड्दै !
एएफसी कप अन्तर्गत नेपालको लिग बिजेता मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लबले (आइएसएल) च्याम्पियन चेन्नाइयिनसँग भिड्दै छ। सो खेल नेपाली समयअनुसार साझा ७:४५ बजे सुरु हुनेछ। चेन्नाइयिनको घरेलु मैदानमा हुने सो खेलमा मनाङको लक्ष्य Continue Reading
Match Details Match: Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, 26th Match Date/ Time: 12th April/ 8:00 pm IST, 8:15 pm NST Venue: Eden Gardens, Kolkata League: Indian Premier League (IPL) Continue Reading